Wufuud uu hor kacayo gudoomiyaha barlamaanka dawlada federalka prof.Jawaari oo kismaayo ka degey. | WARSOM.COM - Wararka Soomaaliya,warka soomaaliya,Somalia News
Home Macluumaadka GMDQ & Xisbiyada Wufuud uu hor kacayo gudoomiyaha barlamaanka dawlada federalka prof.Jawaari oo kismaayo ka...
Wufuud uu hor kacayo gudoomiyaha barlamaanka dawlada federalka prof.Jawaari oo kismaayo ka degey.
Guddoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sh. Cusmaan [Jawaari] oo uu wehliyo guddoomiye ku xigeenkiisa labaad, Mahad Cabdalla Cawad, wasiirro ka tirsan xukuumadda iyo xildhibaanno baarlamaanka Somalia u metelaya shirka wadatashiga Qaran ee doorashooyinka ayaa duhurnimadii maanta gaaray magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose.
Jawaari iyo Wafdigiisa waxaa Garoonka Diyaaradaha Kismaayo kusoo dhaweeyay Ra’iisul wasaaraha Somalia, Cumar C/rashiid Cali, madaxweynaha Jubbaland, xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo horay u joogay magaalada Kismaayo iyo mas’uuliyiin ka kala tirsan Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo maamluka Jubbaland.
Madaxweynaha Jubbaland, Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) oo ka hadlay soo dhaweynta wafdiga kaddib ayaa tilmaamay inuu aad ugu faraxsan yahay in guddoomiyaha baarlamaanka uu yimaado Kismaayo markii ugu horreysay, isla markaana hadda ay yihiin wafdiga muhiimsan ee imaanaya, waxaana uu xusay in ujeeddada uu u yimid ay tahay ka qayb-galka shirka looga tashanayo doorashooyinka 2016-ka ka dhacaya dalka oo dhowaan Kismaayo ka furmi doona.
Ugu dambeyn, guddoomiyaha baarlamaanka Somalia, Jawaari oo isna dhankiisa ka hadlay goobta ayaa ka mahad-celiyay sida lasoo dhaweeyey wafdigiisa; wuxuuna tilmaamay inuu rajeynayo in shirka wadatashiga Qaran ay kasoo baxaan qodobo dhaxal-gal u ah ummadda Soomaaliyeed oo dhan; waxaana loogu magac-dari doono go’aankii Kismaayo.
Previous articleMadaxweyne Xasan SHeekh oo manta gaarey magaalo madaxda gobolka SH/dhexe ee Jawhar.
Next articleSHir looga soo hor jeedo kulanka maamul u sameynta ka dhacaya magaalada Jawhar oo B/weyne lagu qabtey/waa maxey tabashadu?.